Za tsy handoa hetra
Date: 21 février 2017 - 11:23
za manana fitotoam-bary lehibe roa sy fiompiana omby vavy be ronono. Manana cyber koa aho ety 67 ha fa tsy declareko, rehefa tratra aho dia lazaiko fotsiny hoe vao manomboka aho, dia izay hatrany hatrany fa izaho tsy hanao fanambaran-ketra izany. Nahoana hoy ianao? Vao tamin'ny tapa-bolana izao no voaroban'ny dahalo ny variko telo taonina, soa ihany fa tsy tao izahay mianakavy kely fa asa angamba. Ny antony andoavana hetra nefa dia hiantohana ny fiainan'ny mpoinina amin'ny ankapobeny, aiza nefa izany? Mbola miomna koa aho io hanao transit fa tsy mideclare izany koa aho. Anjaranareo ao amin'ny hetra ao, be fahaizana ireo ny mijoko ahy raha mahay nareo fa raha izaho tsy ho any aminareo!!
Re: Za tsy handoa hetra
Date: 21 février 2017 - 14:08
Ny anton'ny handoavana hetra ange eto amintsika tsy hoan'ny sécurité publique na sevice voirie toy ny any ampita e, fa hatao handehanan-dry zalahy ho any ampita, hatao ho prime isaky 6mois ny piasan'ny finance, hividianana 4x4 hoan ny députés sns zany hoe raha misy ambiny izay vao ho an'ny vahoaka. Jereo ange ny 10% ny vidina carburant makany andrafanja hanaovana fonds d'entretient routière FER, aiza ny lalana vita, jereo ny aloan'olona amin'ny ermis biometrie aiza daholo ireny taxe ireny impôts ireny sns aokizay sao toran'eto aho
Date: 24 février 2017 - 14:28
Raha ny isan i vam mi circule mividy essences eto aloa, tokony tsisy lalana goaka izany intsony eh! Raha mandeha @tokony ho izy ny sosin i fer
Date: 22 mars 2017 - 21:20
Tohanako mihitsy ity hevitra ity.
Zaho koa manao activité idirambola fa ny antony tsy anaovako declaration any amin'ny fisc dia satria tsy hitako loatra ny tombotsoako @zany. Ianao handoa hetra nefa tsy misy zavatra manjary ny eto. Makeny @ tobimpitsaboana ianao ampifilafilain'ny mpitsabo, ny mpitandro filamianana ts manao ny asany @ara-dalàna kanefa hoe volambahoaka no anakaramàna azy ireo. Ny mpiasam-panjakana @ ankapobeny indray toa "migeste" fotsiny, te hiasa miasa ts te hiasa ts miasa, nefa ianao maty mifofotra ery vao mba mahazo ny ho hanina. Etsy andaniny, ny vola hetranao entin'ny mpitondra anaovana plaisir fotsiny... Izany no fiainana eto @ firenena Babakoto. Aleo ts mifanadala intsony fa samy miaina @ fianainy. Samy manao izay hahavelona azy.
Date: 23 mars 2017 - 08:35
Ny antony tsy andoavako hetra koa dia vao ao amin'ny fisc dia efa masay ny mpiasa nefa ny tena handoa vola
Date: 19 avril 2017 - 15:37
Za koa mba tsy te handoha fa ahoana zany no anananareo carte fiscale?
za manao exportation otrany tena tsy maintsy mi déclarer ihany
nefa c'est vrai, kivy be ianao, satria ianao mi déclarer indray no mbola itsongoloany avy eo.
Date: 20 avril 2017 - 11:07
Par: fanetriben'ny firenena
Date: 20 avril 2017 - 15:38
Mety ho misy fahamarinany ny anao ry zamanakarenabe kanefa kosa adidy ary fitianva-tanindrazana voalohany ny fandoavan-ketra.
Eny fa na dia tsy mandeha @ laoniny aza ny fitantanana ny firenena. Ka raha tsy handoa hetra avokoa ny olona dia ho aiza no lalankalehan'ity firenena ity.
Izaho manokana izao mandoa hetra ary retenue à la source ny hetrako, maharary ahy kanefa adidy io.Izaho ihany koa manana activités hafa ary andoavako hetra ihany koa tsy mampaninona.
Fa ny zavatra hitako dia mavesatra loatra ny formalités ary hasarotina mihitsy mba hanjakan'ny kolikoly. KA eto no mila fanavaozana tanteraka sy fanamorana ary mba tokony azo eritreretina ny fahafahana mandoa tsikelikely fa tsy akambana tamba-be isan-taona ohatra.
Re: mangataka sosokevitra
Date: 03 mai 2017 - 16:36
bonjour antsika jiaby
za indray mbola mpianatra ,manao fanadihadiana mikasika hetra eto madagascar.
hanao soutenance master II , nytenako. namaky ireo antony ireo olana eto ambony ny tenako.
mangataka sosokevitra avy aminareo aho momba fametrahana politique fiscal incitative to amintsika aho.ino no tokony atao mba handoa hetra anareo.Misaotra
Date: 04 mai 2017 - 18:29
Ka rehefa tsy handoa hetra dia aza mimenomeno rehefa simba ny..., Tsy misy ny..., tsy mandeha ny..., misondrotra ny...! Izay mandoa hetra ihany no olom-pirenena! Tsy manan-jo ihanao rehefa tsy manefa adidy.!!
Date: 31 mai 2017 - 13:54
Edmina> efa natsipiko io ny iray
1. azo aloa tsikelikely genre acomptes provisionnelles kanefa tsy ferana ny fotoana sy ny vola azon'ny contribuables aloa, tsy misy sazy na date limite hoe bimestriel na semestriel fa arakaraky ny fahafahan'ny contribuables natokana manokana hoan'ny mpandoa impôt synthétique, na hetran tany sy hetran trano ihany koa, na IRNSA (profession libérale sy gérant majoritaire SARL).
2. Foanana na ampidinina ho 20 000 Ar ny fahatarana @ déclaration fa mavesatra loatra ilay 100 000 Ar.
3.Hoan'ny mpitatitra guichet unique dia tokony ahavitana ny taratasy rehetra patente sy ny etsetra ary atao publication mazava ny barème sy ny vola aloa.
4. Ity koa no tena zava-dehibe : Tsy maintsy tazonin'ny experts comptables na centre de gestion agréé ny comptabilitén'ireo orinasa madinika. Noho izany tokony sokafana malalaka ny fianarana sy ny fifaninana hidirana ho expert comptable.
Ary atsangana farafahakeliny isaky ny district ny CGA (mety ho nofinofy hoy ianareo kanefa azo tanterahana tsara.
5. rehefa vita ireo dia atao régime iray daholo ny contribuables tokony mibaby ny TVA daholo (assujeties daholo) fa ny taha no atao samihafa toy ny any @ firenena mandroso rehetra. Foana daholo izany le régime hoe réel simplifié, IS.
Ny taux izany ohatra hamaivanina ny fitateram-bahoaka sy entana PPN 5% h@ 10% ohatra, ohan'ny restauration sy hotellerie 5%, ny fampianarana sy fanondranana entana, fitsaboana fanafody 0%, ny ambiny 20%. NY TVA @ solika ampiasain'ny mpitatitra rehetra na antanety na andranomasina tokony ho déductibles ihany koa.
Ny tombotsoa @ assujetissement au TVA hoan'ny rehetra mantsy dia manamora ny recoupement ka raha vao hita collectée any @ orinasa A tsy maintsy hita @ déductible orinasa B.
Santionany ihany ireo fa raha ireo no tanteraka efa zava-dehibe.
Date: 31 mai 2017 - 14:49
fanetriben'ny firenena>pointe 4 mbola ho nofy izany dia iza no handoa ny karaman'ny expert compta, ohatra en moyenne 100 000 ar/h ny karaman'ny expert ary mbola azo isaina amin'ny ratsatanana eny fa na any ampita aza.
point 2 efa mihantra ve sa mbola vinavina
Avy aiza daholo ny source ndreo information ireo
Date: 03 juillet 2017 - 07:36
Mbola manentana hatrany ny tsy tokony andoavana hetra raha hatao fafy katrana @ députés, douanes, Claudine sns......izay kely efa any aminao. Toa ny vahoaka efa mijaly ihany no mamoky an'ireo voalazako ireo. Efa tsy lazaina intsony ny prezidà, ministra, senatera, ny jeneraly marobe.
Date: 22 juillet 2017 - 09:37
aleo nareo izay tsy andoa hetra ny miaritra sy mijery fotsiny ny tsy fandriampalemana, tsy ny filavorarina ny fanjakana, ny lalana simba...
Adidy ny mandoa hetra ary zo ny mitaky fanjakana tsara tantana. Rehefa mifidy hoatra fidio izay hitanao fa mendrika. Rehefa miditra birao zo ny mampafantatra ny mpiasa fa tsy @ tokono izy ny hatao ny sasany : tara, tsy mahay mandray olona, tsy Malala fomba, manaiky mandray tsolotra,..
Manaiky kosa ahy nefa fa tokony ny fanjakana ny mampiseho fietsika mendrika voalohany. Dia tokony manaraka ny vahoaka. Fa na izany mitenenana foana rehefa mahita tsy mety. Fitiavantanindrazana zany. Isika ihany ange no mizaka ny ratsy eto...